Ilaaladda madaxtooyada Garoowe oo si xun ula dhaqmay wariyeyaal (SAWIRRO) - calanka.com
Ilaaladda madaxtooyada Garoowe oo si xun ula dhaqmay wariyeyaal (SAWIRRO) (Calanka.com) - Posted at 28/04/2013 By Bashka
Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa jirdil iyo burburin qalabkii ay ku howlgalayeen u gyestay Wariyeyaal ka howlga magaalada Garoowe, kadib markii uu soo degay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh.
Sida ay sheegeen Wariyeyaal ka mid ah kuwii jirdilka iyo qaarka kale ee laga burburiyay qalabkooda waxay ilaalada madaxtooyada Garoowe ula dhaqmeen si sharaf dhac ah isla markaana askarta ay kasoo turaanturiyeen albaabka madaxtooyada Garoowe.
Mid ka mid ah Wariyeyaashii maanta laga burburiyay qalabkooda loona geystay jirdilka ayaa sheegay in amarkii lagu dhibaateeyay wariyeyaasha inuu ka yimid afhayeenka Madaxtooyada Axmed Cumar Xirsi Liibaax Joore oo ilaalada ku amray iney ceyriyaan wariyeyaasha kii ka dhega adeegana la garaaco.
Laakiin Liibaax Joore wuu beeniyay arintaasi markii danbe xili uu la hadlayay warbaahinta gudaha Puntland.
Si sharaf dhac ah ayey askarta ilaalada Madaxtooyada ay ula dhaqmeen wariyeyaasha, iyadoo la arkayay iyagoo garbaha inta laga qabto lasoo turaantureynayo.
Saxafiyiinta Garoowe ayaa waxay wadaan qorshe ay go'aan mideysan ugu qaadanayaan dhacdadan iyo kuwa la mid ah ee ay kala kulmaan ilaalada madaxtooyada garoowe.